Miyuu Messi soo barbareyn doonaa Rikoorrka Cristiano Ronaldo kulanka caawa ee Inter Milan?? – Gool FM
(Catalonia) 02 Oct 2019. Shaqo gaar ah ayaa sugeysa kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi haddii uu ka qey bqaato kulanka caawa ee Inter Milan.
Barcelona ayaa caawa garoonkeeda Camp Nou ku soo dhaweyn doonta kooxda reer Talyaani ee Inter kulanka labaad GROUP F ee tartanka Champions League.
Xiddiga kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa awooday inuu soo barbareeyo rikoorka halyeeyga kooxda Real Madrid ee Raul Gonzalez ee ahaa in 33 kooxood uu gool kaga dhaliyay tartanka Champions League, kaddib markii uu shabaqa ka soo taabtay Bayer Leverkusen kulankii xalay ka dhacay Allianz Stadium.
Si kastaba ha noqotee, Lionel Messi ayaa haddii uu caaw awood u yeesho inuu ka qeyb qaato kulanka caawa ee Inter Milan isla markaana uu gool ka dhaliyo wuxuu soo barbareeyn doonaa rikoorka Cristiano Ronaldo ee ah inuu goolal kaga dhaliyay 32 kooxood tartanka Champions League.